Bugharịa nkebi mgbọrọgwụ na diski ọzọ | Site na Linux
Wolf | | GNU / Linux, Netwọk / Sava, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Na nkuzi nke taa, aga m akọwa otu ị ga - esi mee ka mgbọrọgwụ nke mgbasa Linux anyị na ngalaba ọzọ (ma n’otu draịvụ ike ma ọ bụ na ọ bụghị). Mkpa a bịakwutere m n'etiti afọ gara aga, mgbe m ka na-eji Chakra, kemgbe ahụ ọ bụ usoro m ji mee ihe karịrị otu oge na nsonaazụ na-enye afọ ojuju na nsogbu efu.
Ọ bụrụ na agbaso usoro ndị ahụ na leta ahụ, ọ bụ nchekwa 100%, ọfụma ọfụma ma na-agbanwe agbanwe kpamkpam. Anyị ga-achọ naanị Live CD nke distro ọ bụla anyị nwere n’ebe ahụ (otu n’ime Ubuntu, dịka ọmụmaatụ, ga-emezu ebumnuche anyị), ma chọpụta nke ọma nke bụ isi mmalite na njedebe nkebi.
Maka ozi dị otú ahụ, anyị nwere ike ịgakwuru GParted ma ọ bụ KDE Partition Editor. Mgbe anyị gburu ha, anyị ga-ahụ windo dị ka nke dị na nseta ihuenyo dị n'okpuru. N'ebe ahụ, anyị ga-achọta nkebi mgbọrọgwụ anyị ma lelee diski nke ọ bụ (sda, sdb, sdc ...), nọmba ole ọ nwere (sda2, sdb1, sdj5, wdg) na ihe bụ UUID (mkpụrụ akwụkwọ alphanumeric) koodu ị ga - ahụ na ngalaba nke "ozi dị elu"). N'ụzọ doro anya, ọ bụrụ na anyị ga-agagharị nkebi anyị ga-achọ ebe njedebe, yabụ na anyị ga-ebu ụzọ mepụta oghere na diski ike iji mee njem ahụ, ma dee data kwekọrọ.
Tupu ịga n'ihu, Achọrọ m ịkọwa na na nkuzi a, m na-ezo aka na Grub2; ọ bụrụ na ị jiri bootloader ọzọ ụfọdụ usoro ma ọ bụ iwu nwere ike ịdị iche - n'eziokwu, ọ dị mfe karịa Grub Legacy-. Yabụ, site na ozi ahụ tupu edere ya na mpempe akwụkwọ, anyị ga-arụ ọrụ:
1) Anyị na-amalite kọmputa na Live CD anyị na-eche ka desktọọpụ rụọ ọrụ.
2) Na ọnụ anyị na-etinye iwu abụọ a:
sudo mkdir / mnt / ochie
sudo mkdir / mnt / ohuru
3) Mgbe ahụ, anyị pịnyere iwu ndị a:
sudo mount / dev / sdaX / mnt / old (ebe sdaX bụ nkebi mgbọrọgwụ mbụ).
sudo mount / dev / sdbX / mnt / new (ebe sdbX bụ nkebi mgbọrọgwụ ọhụrụ).
4) Mgbe itinyere akụkụ nke ọ bụla, anyị gaba idetuo faịlụ iji iwu abụọ (otu maka faịlụ nkịtị na otu maka data zoro ezo). Ma eleghị anya, nke abụọ adịghị mkpa kpamkpam, mana m na-agba ya ọsọ ma ọ bụrụ na ijiji. Akụkụ a ga-ewe nkeji ole na ole:
sudo cp -rav / mnt / ochie / * / mnt / ọhụrụ
sudo cp -rav /mnt/old/.* / mnt / ọhụrụ
5) Anyị wepu ochie nkebi na pịnye di na nwunye ọzọ iwu:
sudo umount / mnt / ochie
sudo ugwu -o bind / dev / mnt / new / dev
sudo mount -t proc ọ dịghị / mnt / ọhụrụ / proc
6) ugbu a anyị chroot ọhụrụ nkebi iji tinyegharịa Grub2. Iwu nwụnye gbanwere dabere na LiveCD ị nwere, ebe ọ bụ na distro ọ bụla nwere ụzọ nke ijikwa nchịkọta. Na Chakra na Arch, a na-eji sudo pacman -S grub eme ihe, mana na nkwekọrịta Debian a na-eme ya otu a:
sudo chroot / mnt / ọhụrụ / biini / bash
sudo grub-install / dev / sdb (ebe sdb bụ draịvụ ike ebe anyị nwere nkebi mgbọrọgwụ ọhụrụ, anyị ekwesịghị itinye ọnụ ọgụgụ na ya ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri ya).
7) Ugbu a, Tupu ịmalitegharịa, anyị ga-edozi obere obere nkọwa nke fstab na grub.cfg. Iji mee nke a, anyị dezie grub.cfg ya na onye ndezi ederede kachasị amasị anyị (kate, gedit, nano ...):
Dịka ị pụrụ ịhụ na onyogho a, egosipụtara m akụkụ ndị kachasị mkpa anyị kwesịrị ile anya, mana enwere ike ịbawanye (chọọ ha ma gbanwee ha ịgbaso otu ụzọ ahụ). Site na data sitere na nkebi ohuru ohuru anyị (UUID na ụlọ ọrụ), anyị na-aga n'ihu iji dochie amaokwu ochie na ndị ọhụrụ:
Ebe ị tinyere (hdX, Y), anyị na-agbanwe ọnụọgụ nke X na Y dị ka ndị a:
X: na-egosi nọmba diski ike. Ọ bụrụ na diski ahụ bụ sda, X dị ka 0. Ọ bụrụ na diski ahụ bụ sdb, X dị ka 1. Ọ bụrụ na diski ahụ bụ sdc, X hà 2, wdg.
Y: na-egosi nkebi nọmba. 1,2,3… Ihe Nlereanya: nkebi nke abụọ nke diski mbụ (hd0,2); nkebi nke abụọ nke diski nke atọ (hd2,2) you get nwetara echiche ahụ?
Uzo nke abuo igbanwe bu UUID (koodu nke onu ogugu na akwukwo ozi ogologo), nke ka na-arutu aka na nke ochie. Anyị na-agbanwe ya na UUID nke nkebi ọhụrụ (cheta na ị nwere ike ịlele nke a na GParted, dịka ọmụmaatụ). Lelee data ahụ nke ọma!
Mgbanwe nke atọ, yana otu ihe kachasị mkpa, metụtara obere rektangulu uhie n'okpuru UUID, nke dị na onyonyo "sdb2". Nke a bụ ebe ịkwesịrị igosi nkebi ọhụrụ nke mgbọrọgwụ gị nke, n'ụzọ ezi uche dị na ya, kwesịrị ikwekọ na (hdX, Y). Ihe Nlereanya: (hd0,1) -> sda1 // (hd2,3) -> sdc3
Buru n'uche na mgbanwe ndị a, n'ụkpụrụ, ga-emeghachi dabere na ọnụọgụ nke usoro sistemụ anyị dị na Grub. Enwere m ntinye Chakra atọ, n'ihi ya, m ga-agbanwe data ahụ ugboro 3. Otú ọ dị, M na-adụ gị ọdụ ka ị gbanwee naanị ntinye mbụ na, ozugbo ị hụrụ na ihe niile na-amalite n'ụzọ ziri ezi, gaa n'ihu gbanwee ndị ọzọ, site na sistemụ arụmọrụ gị n'ezie.
8) Edozi nsogbu nke Grub, anyị na-aga fstab.
sudo kate / wdg / fstab
Anyị na-achọ UUID nke / ma anyị gbanwere ya maka nke ọhụrụ, dịka anyị mere na nke gara aga. Anyị na-azọpụta.
9) Anyị nwere ike ịmalitegharị ma chọpụta na ihe niile dị n'usoro. Ọ bụrụ na sistemụ arụmọrụ na-arụ ọrụ nke ọma, anyị nwere ike ịga n'ihu iji dochie data anyị hapụrụ na-agbanweghi agbanwe na ntinye ndị fọdụrụ nke faịlụ grub.cfg, yana ihichapụ ngalaba mgbọrọgwụ ochie - ọ bụrụ na ọ bụ ọchịchọ anyị-.
Nke ahụ bụ maka taa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Bugharịa mgbọrọgwụ nkebi na diski ọzọ
Nnukwu nsogbu dijo
Nke a na-achọ XD. daalụ
Ọ bụ usoro dị oke nchebe, ejiri m ya ọtụtụ ugboro afọ gara aga, na ihe dị mma bụ na ọhụụ / nkebi ahụ agaghị enwe nkewa faịlụ ...
Ọ bụ ezie na ọ dịbeghị anya m gbalịrị ịgbanwe nkebi mgbọrọgwụ na ụdị dị iche iche nke na-agbanwekwa faịlụ faịlụ (site na reiserfs ruo ext3), mana ọ gaghị ekwe m omume ịme ya n'ihi mbọ ndị ọzọ na ntụgharị m nyere, n'ụzọ ụfọdụ na mmalite usoro nchoputa dara de / n'ihi eziokwu na ọ na-achọ a reiserfs usoro / nkebi mgbe ọhụrụ e the na ext3. Enterbanye ntinye mode ma na-arịgo na aka / dị ka ext3 usoro a rụrụ ọrụ nke ọma, mana mmalite ọzọ ọ dara ọzọ maka otu ihe ahụ. Enweghị mmezi nke grub ma ọ bụ fstab nke na-arụ ọrụ ... na-achọ mgbe niile / nkebi na reiserfs, enweghị ike ịchọta azịza ya ...
Nke ahụ dị ka enwere ụfọdụ faịlụ na-atụ aka na ngalaba nke reiserfs. Ma eleghị anya, ọ bụ ihe na-enweghị atụ site na bootloader ma ọ bụ ihe yiri nke ahụ, ma ọ bụghị ext3 kwesịrị iburu nke ọma.
Ọ bụrụ na nke ahụ bụ ihe m chere ... ma were ọtụtụ awa na-achọ ihe mana achọtaghị ihe ọ bụla ... ọbụnadị ịntanetị.
Ka o sina dị, enweghị m ike ịgwa gị na n'oge gara aga, emeela m usoro ahụ n'enweghị nsogbu, ọ bụ na ihe dịka afọ 6 ma ọ bụ 7 agafeela kemgbe m na-eme ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ obi ụtọ ... oge ikpeazụ m gbalịrị ime ya na Debian Lenny, ikekwe nnukwu ihe dị iche bụ kernel, tupu enwere ike iji distro na Linux 2.4.x.
Ka o sina dị, ọ bụrụ na ị gaa ịchọta ngwọta ya, enwere m olileanya na ị ga-ekerịta ya ...
Ezigbo ego, ... ọ bụrụ na m mara na mbụ.
Ee, ọ dị ezigbo mma, ọ dị ka usoro iji gbanwee disk / ụlọ, mana amaghị m ihe ị ga - eme na mgbọrọgwụ.
Ezigbo ozi Ama agbanyeghị na enweghị m ike iji ya, ọ dị mma ịmata ijiji n'onwe ha. 🙂
Ee, na / ụlọ ọ dị mfe karị, n'ihi na ịkwesighi ịtinye Grub ma ọ bụ gbanwee faịlụ nhazi ya. Iomi ihe niile ị chọrọ na idezi fstab ahụ ezuola.
Ọ dị mma na anyị na-ekwu maka / ụlọ, o doro anya na / mgbọrọgwụ chọrọ nlebara anya karịa.
Ọ dịghị ka / Homelọ, nke na-adịkarị obere ịkpụ na mado ma ọ bụ, mezue nke ahụ, detuo na mado.
ezigbo ezigbo ntuziaka, enyi, daalụ nke ukwuu, m ga-achọ ịma ma pdf mbipute ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ enwere ike ibudata ya na ebe, ekele
Lee ị na-aga, ọhụụ si oven;):
daalụ enyi, ọ dị ezigbo mma
Daalụ nke ukwuu! Anọ m na-achọ ihe yiri nke ahụ na ihe dakwasịrị m bụ ịme ihe oyiyi nke nkewa ma weghachite ha mana n'ezie, enwere ọtụtụ ihe na-efu dị ka isi ihe wdg. Yabụ na ọ dabara m dị ka uwe aka!
Ezigbo ozi, ọ bara uru ịnwe ihe ndị a aka ọ bụrụ na ọ bụrụ. Daalụ nke ukwuu.
Ọ bụrụ na ị na-eji Grub2, ọ ga-abụ grub2-wụnye?
Kpachara anya mgbe ị na-eme akwụkwọ ntuziaka ndị a ka ị na-etinye onye ọ bụla n'ime ọgba aghara ma ọ bụrụhaala na ị naghị etinye iwu ndị ahụ.
nwa ojii dijo
Na Arch ochie aha nke grub gbanwere aha ya ka ọ bụrụ ihe nketa na grub 2 hapụrụ dị ka grub naanị yabụ ọ ziri ezi mana n'otu ụzọ ahụ ọ ga-adị mma ka ị gụọ akwụkwọ nke nkesa gị tupu ịme ihe dị mkpa dị ka nke a iji jide n'aka nke aha nchịkọta
na ekele onye edemede m na-achọ usoro zuru ezu na nke a jere ozi m nke ọma
Zaghachi na blacksheepx
Di na nwunye a kariri ihe kariri 5 kariri m, nke a ka nma:
mkdir / media / kk (ebe a gbanyere mgbọrọgwụ nke sistemụ arụnyere)
ugwu -t ext4 -o rw / dev / sda / media / kk
ugwu –bind / proc / media / kk / proc
ugwu –bind / dev / media / kk / dev
ugwu –bind / sys / media / kk / sys
chroot / mgbasa ozi / kk
grub-wụnye / dev / sda (ma ọ bụ sdb,…)
I meela nke ukwuu ọ nyeere m aka nke ukwuu, dịka ihe ọzọ mgbe m depụtasịrị ihe niile na nkebi ọhụrụ ahụ ị nwere ike ịmegharị ihe ndozi na ngwa ọrụ buut, si otú a na-ezere ime ihe 5 gaa n'ihu
sudo tinye-apt-repository ppa: yannubuntu / boot-repair
sudo apt-nweta wụnye buut-fix
a na-egbu ngwa graphifa na nhọrọ dị elu na-arụ ọrụ; ọnọdụ grub na nkebi ọhụrụ ahọpụtara maka imepụta grub.